Ny orinasa mpanamboatra orinasa mpamokatra rongony malefaka sy malefaka - Ny orinasa Shina - Cixi Wenap International Trading Co., Ltd
Home > Products > Fitaovana metaly > Vehivavy orkena malefaka
Vehivavy orkena malefaka
Manana traikefa manan-karena izahay amin'ny famokarana faritra bitika ho an'ny karazana indostria isan-karazany. Toy ny tapany ampahany, Shaft, Fanodina, CNC Fanodina Part, Milling Part, Hardware Accessories, Arrow Metal Part, Fandefasana manokana, Industrial Switch Switch Metal Part ho an'ny medizinina, elektronika, fiberoptic, faritra mikraoba, sns.
Product Introduction of the Female or Male Threaded Trousers Barb
Ny barb (na ny hosoka), izay mampifandray saribao na rongony ho an'ny fantsona, amin'ny ankapobeny, dia manana tadim-boron-dehilahy mifamatotra amin'ny kofehy vavy. Ny tanjon'ny fanaka hafa dia manana tavoahangy iray na maromaro mitambolimbolina - lava lava vita amin'ny kofehy, izay nampidirina ao anaty hosoka matevina. Ny fametahana kiran-drivotra misy famantaran-koditra (na karazana clamp iray hafa) dia matetika ampiasaina, mba hitazonana ny tifitra tsy hipoaka amin'ny tavoahangy matevina. Ny fanamboarana labiera dia azo avy amin'ny varahina ho an'ny fampiasana rano mafana, ary ny plastika dia azo ampiasaina amin'ny rano mangatsiaka; Ny varahina dia heverina ho maharitra kokoa noho ny fampiasana mavesatra. Ny fàfana ho an'ny kofehy dia mety ho kofehy boribory na mivantana.
Product Parameter amin'ny volo malefaka na lahy vatana
BSP, JIC, NPT, DIN, Metric ect.
Stainless steel, Steel brass, Steel carbon, sns.
Volo miloko manga / Nickel plated / Chrome plated
PE Bag + Carton + Box
Ny endriky ny fitaovana sy ny fampiharana ny tavy na lahy na lahy
- Fananganana varahina varahina, volon-koditra volom-bolamena, endritsoratra havanana, sns.
- Azo ampiasaina ny mampifandray ny enta-madinidra, ny entona entona, ny hosoka, ny solika, sns.
- Ny tsara indrindra ho an'ny fantsom-pofona.
Ny antsipirihan'ny vokatra momba ny fehiloha na lahy vatana
Packaging Details:Voamaina ao anaty baoritra fanondranana entana, boaty, kitapo ary manamboatra palettes. Amin'ny ankapobeny na araka ny takian'ny mpanjifa
Fandefasana:Fitaterana an-dranomasina sy fitaterana an-dalamby na mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny mpanjifa.
Hot Tags: Vehivavy orinasa, mpivarotra, mpamatsy, orinasa, vita avy any Shina, varotra, mividy, maimaim-poana, an-tapitrisany, volom-bidy, vidin-tsolika, vidin-tsolika, talenta, avo lenta
Male Thread Hose barb